Mpanina hena be sandry, mpanao legioma mpihinana legioma, mpihinan-kena vita amin'ny volo - Chengye
Sakafo mpihinan-kena be volo DRD350
Ny dicer hena mangatsiaka DRD350 dia azo ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny sakafo malaky mangatsiaka. Azo ampiasaina hanodinana saosisy avo lenta (ohatra: salami). Azo ampiasaina amin'ny lovia eo an-dakozia afovoany; Azo omena amin'ny fivarotana lehibe amin'ny fanapahana koba sy fromazy ary tsipika.
Nifantoka ho mpanamboatra lehibe ny masinina manapaka hena sy legioma
DRD450 Fihinana hena mpihinana
Data data karazana Powe ...
QD2000 legioma mpanao sakafo legioma
Teknika data karazana Pow ...
CQD500 legioma mpanao sakafo legioma
Mpamafa legioma QC3500
Endri-javatra 1. Fehezin'ny c ...
QK140 Sakafo hena
Ahitana ny antsy fanapahana ...
MPAMPIASA eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena